Posted by Phannaywon2comments at 12:21 AM
(၁) " ဘ၀နဲ့ အတွေး "
လူ့ဘ၀ဟာ ပျော်နေသယောင်နဲ့ ပျင်းရိစရာ ကောင်းလာတယ်။ ညစာစားစရာ မရှိတဲ့သူဟာ နေ၀င်ချိန်တွေကို ကဗျာမဆန် နေနိုင်ဘူးလေ။ လွမ်းရေးထက် ၀မ်းရေးကပိုခက်တယ် မလား။ ဘ၀က ကဗျာပီပီ၊ စာပီပီရေးတတ် အောင်မသေမချင်း ချင့်ချိန်နေရမှာပါပဲ။ ရှိတာလေးနဲ့လောက်အောင်စား၊ လှအောင်ဝတ်ကြကြေးဆို လူ့ဘ၀မှာ ပြိုင်ပွဲဆိုတာ မရှိတော့ဘူးပေါ့။ အစွန်းမရောက်တဲ့ မဇ္ဇိုမပဋိပဋာထဲမှာ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်း ကသပ်သပ်ပါ။ လူက၀တ်ကျေတမ်းကျေ မရယ်ချင်လည်း ရယ်နိုင်သေးတယ်။ ဒါဟာ စက်ရုပ်ထက်သာ တဲ့အချက်ပဲ။ ခင်ဗျား ဘယ်လောက်ပဲ ချမ်းသာချမ်းသာ ခင်ဗျားဟာ ငွေဝယ်ကျွန်ပါပဲ။
ဘယ်ရှော့ပင်းမောမှာမှ ဈေးကြီးတဲ့ Branded Life တွေအသင့် မရောင်းဘူး။ ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် Branded ဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးနေရတဲ့ ဈေးသည်လိုပဲ။ လောကကြီးကဘာကို သတိထားရမလဲ ဆိုတာကို ( ! ) မပြဘူး။ ဘ၀ဆိုတာ စီဘောက်ထဲမှာလို စိတ်ကြိုက် ရေးခွင့် မရှိဘူး။ IT ခေတ်မှာ သတင်းစာနာရေး သတင်းထက်အင်တာနက်က အတင်းအဖျင်းတွေက ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ် မလား။ သိပ်လှတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာ ချိုင်းမွှေးတွေရှိနေတာ လောကကြီး အပြစ်လား။ တစ်ခါ တစ်ခါလည်း စတော့ကင်(stocking) ၀တ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးပေါင်လုံးက ကိုယ့်ထက်တုတ် နေတာကျ လောကကြီးက တယ်မတရားဘူး။ ခုခေတ်မှာ အရက်သောက်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးက အပျက်မ မှမဟုတ်တော့တာ။ နေရာတိုင်းမှာ ညနေစောင်း ညဉ့်ငှက်မလေးတွေ ကျက်စားတဲ့ ဒေသဟာ ပိုစည်ကား လေ့ရှိတယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်တော့ သူတို့စက်ရှင်( Section )ခတွေလည်း ကြေးမြင့်ကြရမှာပေါ့။ သူတို့ကိုအပြစ်ပြောဖို့ တော့မရှိပါဘူး။ ကျုပ်ကလည်း သူတော်ကောင်းမှ မဟုတ်ပဲ။
လောကမှာ သူများဦးနှောက် ဖောက်စားတတ်တဲ့ လူကပညာရှိလား၊ အဖောက်စားခံရတဲ့ သူကပညာရှိလား။ တစ်ရက်ကို စာမျိုးစုံ တစ်ဘီလီယံ (သန်းတစ်ထောင်) ကျော်တင်နိုင်အောင် Facebook ကွန်ရက်တီထွင်ခဲ့သူ Mark Zuckerberg ကိုကျုပ်တို့ ကိုးကွယ်ဖို့ လိုအပ်သလား။ ကိုယ်လေးစားရင် ဒူးမညွတ်နိုင်တောင် ဦးညွတ် သင့်တယ်လို့ ကျုပ်ယူဆတယ်။ လူဆိုတာ ဟုတ်တာချည်းပဲ လုပ်နေရင်လည်း လောကကြီးက ပျင်းစရာကောင်း လာတော့မှာပေါ့။
ခုခေတ်စားနေတဲ့ ၀ီကိလိခ် အင်တာနက်ဝဘ်ဆိုက် ထူထောင်တဲ့ Julian Assange တို့လို တစ်လွဲဆံပင်ကောင်း လုပ်မှလည်း ကျုပ်တို့က မျက်စိပွင့်၊ နားပွင့်ရှိမယ်မလား။ နည်းပညာတွေနဲ့ မအားလပ် တဲ့ကြားမှာပဲ သူက ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီး ၂ ဦးကို အလိုမတူဘဲ လိင်ဆက်ဆံမှုလည်း ရှိခဲ့သေးသတဲ့။ လူဆိုတဲ့သတ္တ၀ါမျိုးက အရေးပေါ်မဟုတ်တဲ့ Emergency ထွက်ပေါက်မျိုးကို ရှာဖွေတတ်ကြတာလည်း ခုခေတ်မှာ သိပ်တော့မဆန်း လှပါဘူးလေ။ ကျုပ်လည်း တစ်ခါလောက်တော့ ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်ချင် သေးတယ်ဗျ။ ငရဲမင်းနဲ့ ချက်တင်အကြောင်း အေးအေးဆေးဆေး ဆွေးနွေးကြည့်ချင်တယ်။ ကွန်ပြူတာလက်ကွက်နဲ့ ပြောတာကို ခင်ဗျားအပြစ်ရှိတယ်လို့ ယူဆသလားလို့ မေးကြည့်မယ်။ ဘယ်လိုပြစ်မှုကို အထမြောက်တယ် ဆိုတာပါ ဆွေးနွေးမယ်။ ကျုပ်ဒါတွေ ကမ္ဘာကြီးကို ချပြနိုင်ရင် Person of the year လောက်တော့ အရွေးခံရ လောက်တယ်ဗျ။
လောကကြီးနဲ့ကျုပ်ကတော့ ချစ်သူဖြစ်လိုက်၊ ရန်သူဖြစ်လိုက်နဲ့ပါပဲ။ အခန့်မသင့်ရင်လည်း ကျုပ်ကတော့ ငါကိုင်တုတ်တာပဲ။ သူကကျုပ်ကိုဆို မျက်နှာသာသိပ်ပေးတာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျုပ်ကအလုပ်ချိန်ကလွဲလို့ အလုပ်သိပ်ရှုပ်နေ တတ်တဲ့ကောင်။ ရုံးဆင်းချိန်နဲ့ အားလပ်ရက်တွေမှာ အမောပြေအလုပ်တွေနဲ့ ဇယ်ဆက် နေရတယ်။ ကျုပ်ကတော့ သိပ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ချည်ခင်ကို အစရှာဖို့ဘယ်တော့မှ မကြိုးစားဘူး။ အသစ်တစ်လုံး ပဲထပ်ဝယ်လိုက်မယ်။ အချိန်ကငွေထက် ကြေးကြီးတယ်လို့ ကျုပ်ယူဆမိတယ်။
ကျုပ်က သေမျိုးတွေ အချင်းချင်း မာနတံခွန်တက် နေတာအားကြီး မုန်းတတ်တဲ့ကောင်။ တစ်ကယ်ဆို မြန်မာပြည်ဘွား လန်ဒန်ကကလူလည်း သေမှာပဲ။ နာဂစ်ဖြစ်ပြီး တစ်ကောင်ကြွက် ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ လူမြေကြွက် လည်းသေရမှာပဲ။ အသေပြိုင်ပွဲမှာ အလှဆုံး ဆိုတာ သူ့သမိုင်းပဲ ရှိတယ်။ သေမှတော့အခေါင်းကို ကာလာစုံရွေးခိုင်းဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ စိတ်အေးလက်အေး ဒုန်းဒုန်းချပြီး အသက်ကို ထုတ်ပစ်လိုက်နိုင် ဖို့အရေးအကြီးဆုံးပဲ။ နောက်ဆုံးထွက်သက်ဟာ ညင်သာနေဖို့ပဲ လိုတယ်။ ၀ါကျဆုံးရင်တာ ပုဒ်မ(။) ချလို့ရတယ်။ ဘ၀ဆုံးရင် သူ့အတွက် ပုဒ်မ(။) ဆိုတာ မရှိဘူး။ ကျုပ်က တော့လေ သံသရာကို ကဗျာလုပ်ပြီးရေးရမှာတောင် ကြောက်မိတယ်။ ကျုပ်တို့အတွက် သံသရာကြွေးဆိုတာ နည်းတာမှတ်လို့။ ခင်ဗျားမကျေနပ်ရင် လဲသေလိုက်ရုံပဲ ရှိတော့တယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ အကုသိုလ်ကံတွေ အတွက် လျော်ကြေးကို ဘယ်လောကပါလနတ်မင်းကမှ တတ်နိုင်မှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ လူတွေက ကောင်းမှုလုပ်ရမှာသာ ၀န်လေးနေသလိုလို၊ မဆိုင်သလိုလို နေတတ်ကြတာ။ အကုသိုလ်များလုပ်ဖို့ဆို သေချာပြင်ဆင်ပြီး အပင်ပန်းခံ တတ်ကြတာမျိုးတွေလေ။
ဘ၀မှာ ပညာကုန်သွယ်ခြင်းက ငွေကုန်သွယ်ခြင်း ထက်မြတ်သတဲ့။ ခုခေတ်ကတော့ ငွေကုန်သွယ်ခြင်းကပဲ ပိုမြတ်နေသလိုပါပဲ။ ရွှေအိုးရှိမှ ပညာရှာလို့ ရတဲ့ခေတ်မလား။ " Life is No money, No beauty." ရာနှုန်းပြည့်တော့ ကျုပ်မဆိုလိုပါဘူး။ ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ်နေရာကို ယူနေကြတဲ့ အချမ်းသာဆုံး ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေထက် လူမသိသူမသိ နံပါတ်တစ် နေကြတဲ့လူတွေ မရှိနိုင်ဘူးလို့ ခင်ဗျားတို့ထင်သလား။ " အဟက် " ဒီလိုပဲ လှောင်ရယ်ချင်တော့တယ်။ ပညာတတ်နဲ့ လူချမ်းသာဆိုတာ တစ်ကိုယ်တည်း ပူးနေမှ လူဖြစ်ကျိုးနပ် တဲ့ခေတ်လေ။
ခုခေတ်က Professional နဲ့ ၀ါသနာကို ခွဲတတ်လာကြပြီ။ များသောအားဖြင့် ၀ါသနာပါရာနဲ့ ငွေရှာတာထက်၊ ငွေရှာနေရင်းမှ ၀ါသနာပါရာကို အကောင်အထည် ဖော်နေကြတဲ့ခေတ်လေ။ ဒီခေတ်မှာ စာရိတ္တကောင်းပြီး မွဲတေနေရင်လည်း လူရာမ၀င် နိုင်ပြန်ဘူး။ ဂလိုဘယ်ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကျုပ်တို့ဦးနှောက်တွေ ကောင်းနေဖို့၊ သွေးတွေရဲနေဖို့ပဲ လိုအပ်တယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျောင်းမှာအဆင့်နောက်ဆုံး ရခဲ့လို့ ၀မ်းနည်းစရာ မရှိပါဘူး။ ခပ်တုံးတုံးအတွေးအခေါ် တွေကိုသာ ခေါင်းထဲထည့်မထားဖို့ လိုအပ်တာပါ။ ဘ၀မှာ ခေါင်းကိုက်တာနဲ့ ခေါင်းဖြတ်လိုက်စရာမှ မလိုအပ်တာ။
" ဘ၀ဆိုတာ အတွေးတွေကို တင်ဆောင်ခုတ်မောင်းလာတဲ့ ရထားတစ်စီး လိုပါပဲ။ "
Posted by Phannaywon 1 comments at 4:58 PM
လူတိုင်း ဟက်ပီးနယူးယားအတွက် ရင်ခုန်ပျော်ရွှင် တဲ့နေ့တစ်နေ့။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်လဲ့ခိုင် အတွက်တော့ အသဲနှလုံးတစ်ခုလုံး နုတ်ယူသွားသလို ကြေကွဲခဲ့စားနေရသည်။ ဒီဇင်ဘာလို ခိုက်ခိုက်တုန်လှတဲ့ ဆောင်းတွင်း ရောက်တိုင်း ရင်ထဲကအပူမီးဟာ ယခုထိတောက်လောင် နေဆဲပင်။ " ဟက်ပီးနယူးယား " ဟုအော်သံ တွေကြားတိုင်း သတိတရား မရှိတော့ လောက်အောင် သူမရင်ကွဲမတတ် ခံစားနေရသည်။ သူမရင်ထဲက အမာရွတ်ကသေရာပါ နေခဲ့ပြီ။ သူမရဲ့ ရင်တွင်းမီးဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ငြိမ်းသတ်မရနိုင် လောက်အောင် မီးညွှန့်ကြီးလှသည်။ ဒီဇင်ဘာသုံးဆယ့်တစ်ရက် ရောက်တိုင်း ကြေကွဲမှုတွေက သွက်သွက်ခါ နေတတ်သည်။ သူမလောကဓံတရားရဲ့ လှည့်စားခြင်းကို ခုထိအဖြေရှာ မရနိုင်ပါ။ အဖြစ်အပျက်တွေက မနေ့တစ်နေ့ကလိုပင် အသစ်အတိုင်း လတ်ဆတ်ဆဲ ရှိနေတုန်းဖြစ်သည်။ ခုလည်းမကြာခင် ရောက်လာမယ့် ထိုနေ့အတွက် သူမတွေးရင်း ငိုရပေဦးမည်။ သူမအတွက် မျက်ရည်က ခံစားရသလောက် မကျနိုင်တော့ပါ။
အဲဒီနေ့တုန်းကပေါ့။ ဒေါ်လဲ့ခိုင်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက် ဧည့်ခန်းထဲ စကားစမည်ပြောရင်း သားအိမ်အပြန်ကို စောင့်နေကြသည်။ မိုးသိပ်မချုပ်စေဖို့ သူမသားကို သေချာမှာ လိုက်သေးသည်။ သားကဆိုင်ကယ်စီးရင် အရှိန်ကို တင်မောင်းတတ်သော အကျင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သူမသားကို အပြင်သွားတိုင်း ရတက်မအေးနိုင် ရှိလှသည်။ ဒီညလို နှစ်ကူးမယ့်ညဆို လူတွေက သိပ်ရှုပ်ထွေးလှသည်။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြေပြီးတာနဲ့ ဂျပန်ဆိုင်ကယ်ဝယ်ပေးဖို့ ကတိပေးမိတာ မှားသွားလား ဟုသူမ မကြာခဏ တွေးမိသည်။ အဖေလုပ်သူ ကတော့ မင်းသားက ယောင်္ကျားလေးပါကွာ ဆိုပြီး သိပ်အပူအပင် မရှိလှ။ သားကခုမှ ဆယ်ကျော်သက်လေးမို့ သူမသိပ်စိတ်မချတာတော့ အမှန်ပင်။ သားသမီး ဆက်မထွန်းကားခဲ့လို့ တစ်ဦးတည်းသောသားကိုပဲ အားကိုးပြီးချစ်နေရသည်။ ညဆယ်နာရီ ထိုးခါနီး အချိန်ထိ သားကအိမ်ပြန်မရောက်သေး။ သားအိမ်ပြန် မရောက်သေးတိုင်း သူမစိတ်ဒုန်းဒုန်း ချပြီးမအိပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ မေးကနဲ ငိုက်ကျသွားရာမှ အသံသဲ့သဲ့ ကြား၍ ဒေါ်လဲ့ခိုင်ဆတ်ကနဲ ထထိုင်လိုက်သည်။
" ဟဲ့ သားလေး မိုးချုပ်လှချီလား " သူမလှမ်းမေးလိုက်သည်။ သူမသားကို မမြင်ရသေးပေ။ သူမ မီးခလုတ်ကို ထဖွင့်လိုက်မှ သားကိုမြင်လိုက်ရသည်။ သားမျက်နှာခါတိုင်းလောက် မရွှင်ပြပဲ ညိုးနွမ်း နေသလို သူမ ခံစားနေရသည်။ သူမကို ဘာမှပြန်မပြောပဲ သားလုပ်သူက သူ့အခန်းထဲ ၀င်သွားသည်။ သားသောက်လာတာ သူမအနံ့ရနေသည်။ သားအဖေသိရင် မိုးမီးလောင်မှာဆိုး၍ သူမဘာမှ သားကို ပြောမနေတော့။ သူမ ဧည့်ခန်းမီးကို ပြန်ပိတ်မယ် လုပ်တုန်းသားက သူ့အိပ်ခန်းထဲမှ ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ သူမရုတ်တရက် ကျက်သေသေသွားသလို တစ်ကိုယ်လုံး ရပ်တန့်သွား၏။ သားက လည်ကတုံးအင်္ကျီအဖြူနဲ့ ကချင်ပုဆိုးကို ၀တ်ပြီးထွက်လာခဲ့သည်။ သူမတို့ မိသားစုသုံးယောက် ဘုရားသွားကျောင်းတက်တိုင်း သားကဒီလို ၀တ်လေ့ရှိသည်။ သူမသားမျက်နှာကို သေချာစိုက်ကြည့် လိုက်သည်။ အံ့သြထိတ်လန့်မှုနဲ့ အတူသူမ မင်သက်သွားခဲ့သည်။ သားမျက်နှာမှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ စိုရွှဲနေပါလား။
" သား "
သူမတိုးတိုးလေး ခေါ်လိုက်ပေမယ့် အသံကခပ်ကျယ်ကျယ် ထွက်သွားသည်။ သူမခေါ်သံကြားမှ သားလုပ်သူက သတိဝင်လာသလို ကမန်းကတန်း မျက်ရည်သုတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူမဆီကိုတိုးလာခဲ့ပြီး ပါးပြင်ကိုခပ်ဖွဖွ နမ်းလိုက်သည်။
" သား မေမေနဲ့ဖေဖေကို သိပ်ချစ်တယ် "
သားကပြောပြီး သူမကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်။ သူမရှေ့ ရိုကျိုးစွာပဆစ်တုပ် ထိုင်ပြီး သူမနှင့် အိပ်နေတဲ့ အဖေ လုပ်သူကို ကန်တော့လိုက်သည်။ လိမ္မာလိုက်တဲ့ သားလေးလို့ သူမပြော မထွက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ သူမရင်ထဲမှာ စကားလုံးတွေ ပြောမရလောက်အောင် ဆို့နှစ်နေခဲ့သည်။ နှစ်သစ်ကို သားလေးက မိဘတွေကို သိတတ်တဲ့ ကုသိုလ်လေးနဲ့ စတင်လိုက်တာ သူမသိလိုက်သည်။ သူမလက်ထဲက စိတ်ပုတီးကို သားကလှမ်းယူလိုက်သည်။
" မေမေ သားပုတီးစိတ်ချင်လို့ပါ "
သူမအတွက်တော့ သားဟာဒီနေ့သိပ်ကို ထူးထူးခြားခြား ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေသည်။ သူမ အသက် ထက်တောင် သားလေးအပေါ် မေတ္တာပိုလွန်းနေမိတော့သည်။ သားကပြောပြောဆိုဆိုပင် ဘုရားခန်းဆီကို ဦးတည်သွားခဲ့သည်။ သူမကြည်နူးတဲ့စိတ်က အိပ်ချင်စိတ်မရှိ လောက်တော့ လောက်အောင် လန်းဆန်း နေမိတော့သည်။ သားအဖေကို မနက်ကျမှ ပြောပြဖို့ သူမစိတ်ကူးခဲ့သည်။
ဒီလိုနယ်မြို့လေးမှာ မြို့မျက်နှာဖုံးဆိုနိုင်တဲ့ သူဌေးစားရင်းဝင် တွေထဲမှာ ဦးရဲထွန်းနဲ့ ဒေါ်လဲ့ခိုင် ဆိုတာမပါမဖြစ်။ ဆန်ကုန်သည် အကြီးစားတန်းဝင် များဖြစ်သည်။ သူတို့ရှာဖွေရသမျှငွေကြေး များသည် ဒီတစ်သက်စားမကုန် နိုင်ရှိလှသည်။ အရွယ်လွန်မှ အိမ်ထောင်ကျတော့ သားသမီးက ဆက်မထွန်း ကားတော့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သားယောင်္ကျားလေးဆိုတော့ အားကိုးအားထား ရှိလှသည်။ သားနာမည်ကို
" မောင်ချစ်ထွန်းဝေ " လို့ကိုယ့်ဘာသာပဲ ပေးထားခဲ့သည်။ သားကိုဒီနာမည် စိတ်ကြိုက်ပေးတော့ ဗေဒင်ဆရာက သဘောမတူခဲ့။ သူမက ဗေဒင်တွေသိပ်ယုံကြည့်မှု မရှိပေမယ့် သားကိုအကောင်းဆုံး ဆိုတာချည်းပဲ ပေးချင်လို့ မေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဗေဒင်ဆရာပေးတဲ့ နာမည်တွေကို သူမတစ်ခုမှ စိတ်ကြိုက် မတွေ့ခဲ့ဘူး။
" ခင်ဗျားသားကို အသက်ရှည်ရှည် မနေစေချင်ဘူး ထင်တယ် " ဒီလိုပြောတဲ့ ဗေဒင်ဆရာကို သူမဒေါ်သတွေ ထွက်လိုက်တာ။ သားအဖေတားရတဲ့ အဆင့်ထိပါပဲ။ သားလေးမွေးကတည်းက သူမအကောင်းဆုံး၊ အသန့်ဆုံးဆိုတာတွေပဲ ပေးခဲ့သည်။ တတ်နိုင်ရင်ရွှေလင်ဗန်းနဲ့တောင် သားရဲ့အချင်းကို ဆေးချင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ သားစကားစတတ်တော့ သားက မေမေစမခေါ်ပဲ ဖေဖေလို့စခေါ်ခဲ့လို့ သူမငိုခဲ့ရဖူးသေးသည်။ သူမက သားအဖေကို ကိုကိုရဲ လို့ခေါ်တော့ သားကပါ လူရှေ့သူရှေ့ဆို " ကိုကိုရဲ ကိုကိုရဲ " ဆိုပြီး စကား မပီကလာသံဖြင့် အော်လို့ အရှက်ရဖူးသည်။ သူမဘယ်လောက် အလုပ်တွေရှုပ်နေတောင် သားလေးအ
တွက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင် သူမကြိုးစားသည်။ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန် တစ်စွန်းတစ်စမှ မလစ်ဟင်းရအောင် သတိထားသည်။ သားလေးကို ချစ်တဲ့စိတ်ကသူမအပေါ် လွမ်းမိုးမှုအားကြီးလွန်းလှသည်။ သားလေးဖျားတိုင်း သူမလိုက်ဖျားတတ်၏။ သူမဘ၀မှာ မှတ်မှတ်ရရ သားလေးတစ်နှစ်ခွဲအရွယ်မှာ ကုတင်ပေါ်ကနေ အမှတ်တမဲ့ ပြုတ်ကျဖူးခဲ့သည်။ သားလေးအငိုတတ်သည့် တိုင်သူမအငိုမရပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူမယူကျိုးမရနိုင်တဲ့အဆုံး အပေါ်ထပ်လှေခါးကနေ သားလေးနာသလို နာရစေမယ်ဆိုပြီး ခုန်ချဖို့ထိ ကြိုးစားခဲ့ဖူးသည်။ ချစ်လွန်း၍ စိတ္တဇဆန်ခဲ့ဖူးသည်။ သတိလက်လွတ်မိတဲ့အထိတောင် မိမိထက်သားကို ပိုချစ်ခဲ့သည်။
တစ်နေ့ကပဲ သားကိုတက္ကသိုလ်ထားမည့် ကိစ္စနှင့် လင်မယားကတောက်ကဆ ဖြစ်ခဲ့သေးသည်။ တစ်ကယ်ဆို သားက ခုမှဆယ်တန်း အောင်စားရင်းတောင် ထွက်သေးတာမဟုတ်။ သားကို ဘယ်တက္ကသိုလ်မှာ ထားရင် အဲဒီမြို့မှာပဲ အိမ်ဝယ်ဖို့၊ စီးပွားရေးလက်ခွဲလုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေရတာ သူမရတက်မအေး နိုင်ရှိလှသည်။ သူမအနေနဲ့ သားကိုသိပ်မပင်မပန်းပဲ ဘ၀ကိုရှင်သန်ခွင့်ရအောင် နည်းမျိုးစုံစဉ်းစားထားသည်။ တစ်ခါ တစ်ခါလည်း သူမကိုယ် သူမရယ်ချင်မိသည်။ သူမတို့မောင်နှမ ခုနှစ်ယောက်လုံးကို မိဘတွေဘယ်လိုများ ပူပန်ခဲ့ပါသလဲဆိုပြီးတော့ တွေးမိသည်။ သားအတွက်တော့ သူမပိုသွားတယ်ဆိုတာပဲ ဖြစ်နေစေရမယ်။ တစ်ကယ်လို့ လိုသွားခဲ့ရင် ဆိုတာ သူမအတွေးထဲမှာ တောင်စိတ်မကူး ထားဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီသားကို ရှင်ပြုတုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုခွေဆို သူမပြန်ကြည့်တာ ဘယ်နှစ်ခါမြောက်လဲ မရေတွက်နိုင်တော့။ သူတို့လူ့လောကကြီးကနေ ထွက်ခွာသွားချိန် သားလေးကဒီခွေကို တစ်သသနဲ့ ကြည့်နေနိုင်တာပဲ ဆိုပြီးသူမ ပီတိဖြစ်နေခဲ့သည်။ သားလေးအတွက်ပဲ ဇောကပ်လွန်းလို့ ဆရာတော်တစ်ပါးကတောင် တရားဟော ယူခဲ့ရသည်။ ဒီလောက်ထိပြည့်စုံနေတဲ့ မိသားစုဘ၀မှာ ၀ိပဿနာအလုပ်က သားလေးအရွယ်ရောက်ပြီး လက်လွတ်နိုင်မှ စလုပ်တော့မည်ဟု သူမတွေးထားခဲ့သည်။ အဲဒီလောက်ထိတောင် သားကိုချစ်ပါသည်။
ညက သားပြန်လာတာ စောင့်ရင်း အာရုံရောက်မှ ဒေါ်လဲ့ခိုင် တစ်ယောက်အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်။ သူမ နိုးလာတော့ အတော်ပင်နေမြင့်နေခဲ့ပြီ။ သားအဖေတောင်ဆိုင်ကို ဘယ်အချိန်သွားလိုက်သလဲ မသိလိုက်တော့။ သူမ ဖုတ်ဖက်ခါထရင်း သားအခန်းထဲကို သွားချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ သားက အိပ်မောကျနေတုန်းပင်။ ညကတည်းက အင်္ကျီအဖြူနှင့် ကချင်ပုဆိုးစိမ်းအကွက်တောင် မလဲနိုင်ပဲ အိပ်ပျော်နေရှာသည်။ ညတုန်းက ဘယ်အချိန် လောက်မှ အိပ်ပျော်တယ်မသိဘူး။ သားခြေဖျား၊ လက်ဖျားတွေက အေးစက်နေခဲ့သည်။ သူမသားရဲ့ကိုယ် စောင်းနေတာကို တည့်မှတ်ပေးလိုက်ပြီး ခြေရင်းမှ စောင်ပါးပါးလေးကို ခြုံပေးလိုက်သည်။ သူမမျက်နှာသစ်၊ ဘုရားဝတ်ပြုပြီး မနက်စာအတွက် ပြင်ဆင်နေ ခဲ့သည်။ ဒီနေ့က နှစ်သစ်ဆိုတော့ သူမဆိုင်မသွားပဲ တစ်အိမ်လုံးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်မည်။ သားနှင့် အတူတူ မနက်စားစားမည်။ တစ်နေကုန် အတူတူ သားနှင့်ပဲ အချိန်ဖြုန်း လိုက်တော့မည်ဟု သူမဆုံးဖြတ် ထားလိုက်သည်။ သူမက တစ်နေ့တစ်နေ့ ဆိုင်သွားရ၊ စီးပွားရေးလုံးပန်းရနဲ့ သားနှင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ် မနေရသည်မှာ အတော်ပင် ကြာနေခဲ့ပြီ။ အဲဒီအတွက် သူမသားအတွက် စိတ်တော့သိပ် မကောင်းလှပေ။ မနက်ဆယ်နာရီထိုးခါနီး အချိန်ထိ သားကတော်တော်နှင့် မနိုးလာခဲ့။ သူမသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်းပင် ဗိုက်အတော်ပင်ဆာနေခဲ့သည်။ သားနှင့် အတူစားဖို့ စောင့်နေရင်းအချိန် တော်တော်လင့်သွားခဲ့သည်။ သူမလုပ်လက်စ အလုပ်တွေချပြီး သားကိုနိုးဖို့ သူမသားအခန်းဆီကို သွားခဲ့သည်။
" ခွမ်း "
သူမခြေထောက်က ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပန်းအိုးကို ထိမိလိုက်သည် မသိလိုက်တော့။ သူမကြိုက်လွန်းလို့ ဈေးကြီးပေးပြီး သူမကိုယ်တိုင် စိုက်ပျိုးထားခဲ့တာ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ အရိပ်တစ်ကြည့်ကြည့်နဲ့ သူမ ရေလောင်း ပေါင်းသင်လုပ်လာခဲ့တာ။ ခုတော်တော်လေးတောင် ကြီးလာခဲ့ပြီ။ ပန်းမပွင့်နိုင်သေးပေမယ့် မကြာ
ခင်ဖူးတောင်ဖူးနိုင်တော့မယ့် ပန်းပင်လေးပါ။ သူမကိုယ်သူမ ယူကျိုးမရနိုင် ရှိလှသည်။ ပန်းအိုး ကွဲသွား ရုံသာမက ပန်းပင်လေးပါ ပျက်ဆီးကုန်သည်။ သူမကိုယ်တိုင်ပင် အတော်ကိုအံ့သြပြီး အဖြေရှာမရ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ အမြစ်လေးတွေတောင် နောက်ထပ်မရှင်သန်နိုင် တော့လောက်အောင် ပျက်ဆီးကုန်သည်။ တစ်ကယ်တော့ သူမအပေါ်ယံသာ ပန်းပင်လေးကို ရေလောင်းပေါင်းသင် လုပ်နေခဲ့တာ အပင်လေးက အတွင်းမှာ ခြစားနေခြင်း ဖြစ်သည်။ သူမတော်တော်လေးကို စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရသည်။ သူမ စိတ်ပျက် လက်ပျက်နဲ့ သားလေး အခန်းဆီပဲ ထွက်လာခဲ့တော့သည်။
အရေးထဲ သားအခန်းတံခါးက ရုတ်တရက်ဘာလို့ ကြပ်သွားတယ်မသိ။ မနည်းကြီးကို တွန်းဖွင့်နေရသည်။ သားကတော့ အိပ်မောကျမြဲ ကျလျက်ပင်။ သူမသားကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်လိုက်ရင်း သားမျက်နှာလေးကို သေချာကြည့် နေခဲ့သည်။ သားနဲ့ တစ်နေ့လုံးအတူနေမယ်ဆိုမှ သားကအိပ်ပုတ်ကြီး နေလိုက်တာလို့ စိတ်ထဲက ပြောနေမိသည်။ သားမျက်နှာလေးနားကပ်ပြီး သူမခပ်ဖွဖွလေး နမ်းလိုက်သည်။ သူမ နှုတ်ခမ်းဖျားတို့ ရေခဲနှင့်ကပ်သွားသလို အေးစက်ကုန်၏။ သူမရုတ်တရက် ရင်ခုန်နှုန်းက မြန်သွားခဲ့သည်။ ပြီးတော့သားနဖူးကို သေချာစမ်းကြည့်လိုက်သည်။
မယုံကြည်နိုင်လောက်ကိုပင် အေးစက်နေတော့သည်။ သူမပျာပျာသလဲ သားကိုစောစောကခြုံပေးခဲ့တဲ့ စောင်ပါးကိုခွာချလိုက်သည်။ သားရဲ့လက်တို့ ကွေးကောက်နေ၏။ သူမတုန်ရီစွာနဲ့ သားရဲ့ခြေဖျား၊ လက်ဖျားတွေကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်မိသည်။ သူမတစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ဆတ်ခါအောင် တုန်လှုပ်လျက်ရှိသည်။
သူမခေါ်သံသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်တွေတောင် ကြားနေရသည်။ သူမစိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင်ထားပြီး သေချာပြန်ကြည့် လိုက်တော့သားရဲ့ဗိုက်က မလှုပ်မယှက် ငြိမ်နေတာ တွေ့လိုက်ရသည်။ သွက်သွက်ခါနေတဲ့ သူမလက်နဲ့ သားနှုတ်ခေါင်းဝကို စမ်းလိုက်တော့ အသက်ရှူသံ ရပ်တန့်နေသည်။
သူမ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက် ဆက်တိုက် အော်မိမှန်းမသိတဲ့ အော်သံတွေနဲ့ အတူ အသိစိတ်တို့ ယူပစ် လိုက်သလို လွှင့်မျှောကုန်၏။ သူမဘာကိုမှ မသဲကွဲတော့ပါ။ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လိပ်ပြာသည် သူမ၏၀ိညာဉ်ကို ခပ်ဝေးဝေးတစ်နေရာသို့ပို့၍ သူမကို အနားပေးလိုက်သည်။ သူမ၏ စိတ်ဝိညာဉ်ထဲတွင် သူမသည် ပျံဝဲနေခဲ့သည်။ သူမစိတ်ရှိတိုင်း လေယူရာသို့ ယိမ်းနေခဲ့သည်။ သူမကောင်းကင်နှင့် နီးသထက် နီးအောင် ပျံသန်းနိုင်ခဲ့သည်။ သူမလေတိုးသံသဲ့သဲ့မှာ အသိတစ်ချက်တိုးဝင် လာခဲ့သည်။ သူမ လွတ်လပ်ပေါ့ပါး နေခြင်းဟာ တဒင်္ဂရူးသွပ်မူ ဆိုတာပါပဲ။ သူမအမြင့်ဆုံးတစ်နေရာကနေ တစ်ဟုန်ထိုး ဆင်းသက် လိုက်ချိန် သိမ့်ကနဲ သူမခံစားလိုက်ရသည်။ သူမအခုလို ဆက်ပြီးမပျံသန်းနိုင်တော့မှာကို သူမကြောက်လာ ခဲ့သည်။ မတိုးမကျယ်အသံ တွေကသူမကို ခပ်ဝေးဝေးကို မပျံသန်း နိုင်တော့အောင် ဆွဲငင်နေကြသည်။ အိပ်မက်ဆိုတာ တစ်ကယ်မဖြစ်နိုင်မှန်း သူမသိသည်။ ဒီအိပ်မက်က နိုးရင်လည်း ဆက်အိပ်ပျော်ပါစေ။ လောကဓံတရားတွေက အိပ်မက်အဖြစ် မပြောင်းလဲနိုင်မှန်းကို လက်ခံနိုင်ဖို့ သူမကြိုးစားနေရဆဲ ဖြစ်သည်။
မောင်ချစ်ထွန်းဝေ ထိုနေ့က အရက်နှင့် မူးယစ်စေတတ်သော ဆေးတစ်မျိုးရောသောက်၍ ကရောင်ကတန်း ဖြစ်နေခဲ့သည်ကို ဒေါ်လဲ့ခိုင်တစ်ယောက် သိခဲ့ပါမူ………………..။ သုံးဆယ့်တစ်ရဲ့ နေ၀င်ချိန်တိုင်းကတော့ သူမမမျှော်ပဲ နှစ်စဉ်ရောက်လာ ဦးမှာပါ။
Posted by Phannaywon0comments at 9:51 PM
မြို့ကြီးပြကြီး များမှာတော့ ကျနော်သိပ်မပြောတတ်ပါ။ ကျနော်တို့ နယ်မြို့မှာတော့ လက်လုပ်လက်စား ဘ၀တွေဆိုတာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံ နေရတာပါ။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို လိုက်ကောက်ပြီးလည်း ဒိုင်တွေဆီမှာ ပြန်ရောင်းမှ နေ့စဉ်ထမင်းစားနိုင်တဲ့ အလုပ်မျိုးလည်း ရှိတယ်။ သူတို့လေးတွေကို လူတွေက " ပလတ်စတစ် ကောက်သမားတွေ " လို့ခေါ်ကြတယ်။ ဘ၀ပေး အခြေအနေအရ သူတို့လေးတွေဟာ ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြတ်တဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို ၀တ်ပြီး နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အမှိုက်ပုံ၊ အမှိုက်ကြားမှာ ရှင်သန် ကြရတယ်။ သံတို၊ သံစ၊ ပလတ်စတစ်၊ စက္ကူစတဲ့ recycle လုပ်လို့ရတာ မှန်သမျှကို ရှာဖွေပြီး တစ်ဆင့်ရောင်း ကြတယ်။ ကောက်ယူလို့ရသမျှ တွေကိုထမ်းဖို့ အိတ်ကြီးကြီး တစ်လုံးရယ်၊ ပလပ်စတစ်တွေကို လွယ်လင့်တကူ ထိုးလို့ရတဲ့ သံချွန်လို တုတ်တံတွေဟာ သူတို့တွေရဲ့ အဆင်တန်ဆာ ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ တစ်ဝမ်းတစ်ခါး အတွက်ဘ၀ကို ကျားကန်နေကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် လူတွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ သူတို့တွေဟာ သူခိုးတွေ၊ အောက်တန်းစားတွေ၊ လူလစ်ရင်ခိုး တတ်တယ် ဆိုပြီး အမြင်ကျဉ်းတတ်ကြတယ်။ အဆိုးဆုံးက ခွေးနဲ့ရှူးတိုက်ကြမျိုး လုပ်တတ်ကြတယ်။
လူတွေဟာ လူကိုလူလို့မြင်ဖို့ အင်မတန်မှ ၀န်လေးတတ်ကြတဲ့ သတ္တ၀ါမျိုးတွေ မလား။ ဒီလို လမ်းကြိုလမ်းကြား၊အမှိုက်ပုံအမှိုက်ကြားကနေရှာဖွေတာထက် ပိုပြီးအဆင့်မြင့်လာရင်တော့ ရပ်ကွက် ထဲလိုက်ဝယ် တတ်ကြတယ်။ အိမ်တိုင်းမှာလည်း ပုလင်းတွေ၊ ဗက်ထရီအိုးအပျက်တွေ၊ အသုံးမလိုတဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို စုထား တတ်ကြတယ်။ စာရေးသူတို့ ဘိုးဘွား၊ မိဘတွေလည်း ဒါမျိုးစုဆောင်း ထားကြတာ သိပ်ဝါသနာပါကြတယ်။ အိမ်မှာအသုံးမလိုတဲ့ ပစ္စည်း၊ ပစ္စယ မှန်သမျှကို သေသေချာချာ သိုလှောင်ထုတ်ပိုးလို့ နောင်ဘ၀အတွက်ပဲ သိမ်းဆည်းထားသယောင် လုပ်တတ် ကြတယ်။ စာရေးသူ အရွယ် မရောက်ခင်ကတည်းက သိပ်ဘ၀င် မကျလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကလေး ကလေးလိုနေ ဆိုတာ ကရှိသေးတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ထုံးစံက လူကြီးသူမ စကားဆိုတာ အမြဲပဲ မှန်နေသလို မှတ်ယူ တတ်ကြတယ်။ ထားပါတော့လေ။ အရွယ်မရောက်သေးရင် ဘာမှလွန်ဆန်ချင်လို့ မရဘူးဆိုချင်တာပါ။
အိမ်မှာအသုံးမလိုတာတွေ ပြန်ရောင်းတဲ့အချိန်က နွေရာသီစာမေးပွဲကြီး ပြီးတဲ့အချိန်။ အဲဒီအချိန်ဆို တစ်နှစ်လုံးကျောင်းသုံး ဗလာစာအုပ် အဟောင်းမှန်သမျှကို လေလံတင်ပွဲ ကျင်းပချိန်ပေါ့။ ရပ်ကွက် ထဲမှာလည်း ဒီအချိန်ဆို ဒကောက်တောင်း ခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီး လာဝယ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အသံက မကြာခဏ ဆိုသလို ဆူညံနေတတ်တယ်။
" ဒန်အိုးပေါက်.. ကြေးအိုးပေါက်... ဘတ္တရီအိုးပျက်... ပုလင်းခွံတို့ ၀ယ်တယ် ..." များသောအားဖြင့် အဲဒီလိုအော်ပြီး ၀ယ်ကြတယ်။ ဒီလိုအလုပ်အကိုင်မျိုးကို အမျိုးသမီး အများစုက လုပ်လေ့ရှိကြတယ်။ သူတို့အသံက အိပ်နေရင်တောင် နိုးလာနိုင်တဲ့အထိ တော်တော်ကျယ်တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ သူတို့က လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံလိပ်လေးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်ကိုင်ထား တတ်ကြတာပါ။ ကိုယ့်အိမ်က ရောင်းချင်တဲ့ အပိုပစ္စည်းမှန်သမျှ ကိုချိန်ခွင်နဲ့ ချိန်ပြီး ပိဿာချိန်နဲ့ လိုက်ဝယ်တဲ့ သဘောပါ။ ၀ယ်ဈေးကလည်း အမျိုးမျိုး ရှိသေးတယ်။ စက္ကူဆို တစ်ပိဿာ ဘယ်လောက်၊ ပုလင်းဆို ဘယ်လောက် စသဖြင့် သူတို့မှာ ၀ယ်ဈေးရှိတယ်။ သူတို့ကရှိလို့ လုပ်စားကြရတာမှ မဟုတ်တာ။ နေပူကြီးထဲမှာ သူတို့မှာရှိတဲ့ ငွေအရင်းအနှီးလောက်နဲ့ လိုက်ဝယ်ပြီး ဒိုင်တွေမှာ ပြန်သွင်းပြီး မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုံးကန်နေကြရတာပါ။ သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေဟာ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် အိုမင်းနေတတ်ကြတယ်။ အပြောချိုသယောင်နဲ့လည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း ရှိတတ် ကြပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ခိုးစားနေကြတာမှ မဟုတ်တာ။ လူဖြစ်နေတဲ့ဘ၀ကို လူပီသအောင် ကြိုးစားနေ ကြရတာပါ။ သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေအတွက်လည်း မိခင်ကောင်း ဆိုလို့ရပါတယ်။
စာရေးသူရဲ့ မိဘဆွေမျိုးတွေ အပါအ၀င် လူအများစုဟာ သူတို့ကို ကပ်သီးကပ်သပ် ဈေးဆစ် တတ်ကြတယ်။ ကလေးတွေအတွက် မုန့်ဖိုး၊ ပဲဖိုးလေးရအောင်လို့ဆို အသံကောင်းဟစ်ပြီး အိမ်မှာ မလိုအပ်တော့တဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းကြတယ်။ ကိုယ့်အိမ်ထဲကနေ " လာပါဦး "
တစ်ခွန်းလောက် သက်တောင့်သက်သာလေးခေါ်ပြီး အိမ်တွင်းစီးပွားလုပ်ကြတာပေါ့။ သူတို့ရဲ့ ချိန်ခွင်ကို အလေးခိုးသလား သေချာကြည့်လိုက်သေးတယ်။ လူတွေက ကိုယ့်ထက်လူနေမှု နှိမ့်ကျရင် အလိုလိုသင်္ကာမကင်း ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ သူတို့ဝယ်ဈေးထက်ကို ပိုတောင်းကြသေးတယ်။
" ပိုပေးလိုက်ပါလား၊ ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လဲ " စသဖြင့် တောင်းဆိုတတ်ကြတယ်။ ၀ယ်သူခမျာ သူ့မှာရှိစုမဲ့စုငွေကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ပြီးလိုက်ဝယ်နေကြရတာ။ ဒီကြားထဲ ၀ယ်ဈေးတိုးဆစ်လို့ မရရင် " တော်ပြီနောက်တစ်ယောက်ကိုပဲ ရောင်းလိုက်တော့မယ် "ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်တတ်ကြ သေးတယ်။ သူတို့လက်ထဲက ငွေကညစာအတွက်ဆန်ဝယ်ဖို့ ချန်ထားရတာလား၊ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်ဖို့ လူမြင်အောင် လက်ထဲပိုက်ဆံပြရတာလား သူတို့ပဲသိနိုင်မယ်လေ။
စာရေးသူအရွယ် ရောက်လာတော့ မိဘတွေကို စပြီးပုန်ကန်တတ်လာတယ်။ လူတွေကိုလူလို့ နားလည်အောင် ကြိုးစားတယ်။ ဘ၀မှာအယူအစွဲ မှားယွင်းတာဟာ မိရိုးဖလာ လိုက်လုပ်ရမယ့် အလုပ်မှမဟုတ်တာ။ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးအဘက်ဘက် မှာပေါ့။ ကိုယ့်အိမ်မှာ ဘာမှအသုံးမလိုတော့ပါဘူး ဆိုနေမှ ပေးလိုက်တော့ ဘာဖြစ်မှာတဲ့လဲ။ သူများမိသားစု ထမင်းတစ်နပ် စားလိုက်ရရင် ကိုယ့်အတွက် နည်းတဲ့ကုသိုလ်ဒါန မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းဒီလိုလိုက် မကျင့်သုံးနိုင်တောင် ကိုယ့်မိသားစု၊ ဆွေမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ မရရတဲ့နည်းနဲ့ ဖြောင်းဖြမှာပဲ။
" ခင်ဗျားက ဘယ်လောက်ချမ်းသာနေလို့လဲ.." ဆိုခဲ့ရင် စာရေးသူက ထမင်းနပ်မှန်အောင် စားဖို့ချမ်းသာပါတယ်လို့ ဖြေချင်ပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ့်အိမ်မှာ မလိုအပ်တာတွေကို အလကား မပေးချင်တောင် ၀ယ်ဈေးဆစ်တာတို့၊ သူတစ်ပါး တဒင်္ဂစိတ်ဆင်းရဲအောင် မလုပ်သင့်ပါဘူး။ သူတို့ခင်ဗျာ နေပူမိုးရွာကြီးထဲမှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရတဲ့ ကိုယ်လိုလူချင်း အတူတူတွေပါ။ အတိတ်က အကုသိုလ်ကံကို ရင်စည်းပြီး ပေးဆပ်နေကြရတဲ့ သေမျိုးလူပါပဲ။ ငွေသိန်းပေါင်းများစွာ ကိုအခမ်းအနားနဲ့ လှူနိုင်မှ မြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းလို့ မခံယူသင့်ပါဘူး။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ကို တစ်ကယ့်စိတ်ရင်းဒါနနဲ့ ပေါင်းပြီးလိုအပ်တဲ့သူကို ပေးလှူခြင်းဟာလည်း လူပီသတဲ့ သူတော်ကောင်းမျိုးပါပဲ။ သင်ခန်းစာဆိုတာ ယူတတ်မှရတာပါ။ မယူတတ်ရင် အဆိပ်အတောက် တွေကြီးပါပဲ။
အမှတ်တရလေးတစ်ခု ရေးပြချင်ပါတယ်။ စာရေးသူ တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ပြီးချိန်။ ငါးနှစ်လုံးတက်လာခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေ၊ သုံးမလိုတော့တဲ့ ပစ္စည်းတွေက တောင်ပုံရာပုံ ဖြစ်နေခဲ့တာ။ စာရေးသူက ကိုးရီးယားကားထဲမှာ ကျောင်းပြီးရင် ဆိုးလ်မြို့ကို သွားကြသလို ရန်ကုန် ရွှေမြို့တော်ကြီးဆီ ခြေဦးပြင်နေချိန်ပေါ့။ မင်းသားလုပ်ဖို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အသုံးမလိုတဲ့ အစုတ်ပလုတ်အားလုံး ကိုအိမ်ရှေ့မှာပုံထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ဒန်အိုးပေါက်၊ ကြေးအိုးပေါက် လိုက်ဝယ်တဲ့ အမျိုးသမီးကို ခေါ်လိုက်တယ်။ အသက် 50အဒေါ်ကြီးအရွယ်လောက်ပါ။
" အဒေါ် စက္ကူတွေက တစ်ပိဿာ ဘယ်လောက်လဲဗျ "
" 150 ပါ...တူလေး.."
" ဟာဗျာ..ဈေးနဲလိုက်တာ နဲနဲထပ်တိုးပေးပါလားဗျာ "
" တူလေးက ဘယ်လောက်ပေးချင်လို့တုန်းကွယ်.."
" တစ်ပိဿာ 200 ထားလိုက်ပါ အဒေါ်.."
နှစ်ဦးသဘောတူပြီး ချိန်လိုက်တော့ ငါးပိဿာခွဲ ထွက်လာတယ်။ ငါးပိဿာခွဲဆိုတော့ 935ကျပ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ စာရေးသူက
" အဒေါ် 950တော့ပေးလိုက်ဗျာ..နော် "
" ဟာငါ့တူရယ် မလုပ်ပါနဲ့....အဒေါ့်မှာ အဲဒီအစွန်းထွက်လေးပဲ စားရတာပါကွယ်..."
" အော်..ငါ့တူရယ်..ငါ့တူတို့အတွက်ကတော့ ဒီလောက်ဆိုပေမယ့်..အဒေါ်တို့အတွက်တော့ ဒါလေးနဲ့စားရတာပါကွယ်..."
ပြောပြောဆိုဆို နေပူကြီးထဲက လာတော့ချွေးတွေက ပြိုက်ပြိုက်ကျနေတယ်။ သူ့ခေါင်းပေါင်းစနဲ့ သူစိတ်လိုလက်ရ သုတ်နေတယ်။ သူမမျက်ဝန်းထဲမှာ ဒါဟာသူမအတွက် ညစာအတွက်လား၊ နက်ဖြန်အတွက် အရင်းအနှီးသစ်လားတွေးနေ ပုံရတယ်။ ကျနော် သူမ မတောင်းပဲ ရေတစ်ခွက်သွားခတ်ပြီး တိုက်လိုက်တယ်။ နေပူကြီးထဲကနေ နေရိပ်ထဲနားလိုက်တာနဲ့ ရေဆာတတ်ကြတာပဲမလား။ ပြီးတော့ ကျနော်က
" အဒေါ့်ကိုနောက်နေတာပါဗျာ..ဒါတွေကိုကျနော် မရောင်းပါဘူး..အဒေါ့်ကိုအလကားပေးလိုက်မှာပါ..."
လို့ပြောတော့ သူမအံ့အားသင့် သွားပုံရတယ်။ ကျနော်တိုက်တဲ့ ရေတစ်ခွက်ထက် ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းက သူမအတွက် ပိုအေးမြသွားသလို သူမမျက်နှာမှာ မြင်လိုက်ရတယ်။ သူမဟာ ကျနော့်ကို ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပြီး မျက်ရည်တွေဝိုင်းလာခဲ့တယ်။ ရုတ်တရက်ပဲ သူမခေါင်းပေါင်းကိုပြင်ပြီး ဒကောက်တောင်းထဲ ပစ္စည်းတွေကို ဆန့်အောင် ပြွတ်သိပ်ထည့်ပြီး ခေါင်းပေါ်ရွက်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဇရာထောက်နေတဲ့သူမဟာ ထင်ထားတာထက် ပိုသန်မာနေတာကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့လိုက်ရတယ်။ သူမကတော့ ကျောခိုင်းသွားပါပြီ။ ဘာကိုမှလည်း သိပ်ခံစားနေဖို့ အချိန်သိပ်မရသလိုလို သူမထွက်သွားခဲ့တယ်။ စာရေးသူကတော့ တစ်သက် မမေ့နိုင်လောက်အောင် ခံစားဖို့ အချိန်တွေရနေပြီး မျက်ရည်ကျဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘ၀မှာ တစ်ခါလောက်တော့ လူပီသအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့လို့ပါ။ ဘ၀မှာ တစ်ချို့လူတွေရဲ့ဘ၀ဟာ နေပူဒဏ်ထက် ပိုပူနေကြတာ ပါလား...လို့တွေးရင်းပဲ ခပ်ဝေးဝေးက အသံလွင့်လွင့်ကို စာရေးသူကြားလိုက်ရတယ်။
" ဒန်အိုးပေါက်.. ကြေးအိုးပေါက်... ဘတ္တရီအိုးပျက်... ပုလင်းခွံတို့ ၀ယ်တယ် ..."
Posted by Phannaywon0comments at 9:34 PM
Labels: Learn From Life
တစ်ခါတစ်ခါလည်း ဘ၀မှာငိုအားထက် ရယ်အားသန်ရမယ့် ကိစ္စတွေက နိဓဓူဝ သူ့ဘာသူပေါ်နေတာကလား။ သူငယ်ချင်းရဲ့ကုမ္ပဏီမှာ မြန်မာအလုပ်သမားနဲ့ အလုပ်ရှင် သူဌေးကြား မကြာခဏ သူမက၀င်ဖြေရှင်း ပေးရသတဲ့။ များသောအားဖြင့်တော့ ရုံးဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ သူမကအလုပ်သမား အသစ်လေးတွေကို ပိုပြီး နားလည်အောင် ၀င်ပြောပေးတဲ့သဘောပါ။ မြန်မာပြည်ကနေ စရောက်ခါစ ဆိုတော့နားရည် သိပ်မလည် ကြသေး ဘူးပေါ့လေ။ သူငယ်ချင်းကတော့ နားမလည်တောင် ဒီဘော့စ်၊ ဒီအလုပ်နဲ့ ဒီအထာဆိုတာတွေက ရိုး..ဟိုး..နေပြီလို့တောင် ဆိုမယ့် အပါးဝစီနီယာကြီးတောင် ဖြစ်နေပြီလေ။ အဟက်။ သူငယ်ချင်း ကြုံလေ့ရှိတဲ့ စကားအသွားအလာ လေးတွေလည်း ရှိသေးသတဲ့လေ။
" ကျနော်တက်စီတား တာမရပ်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ "
" ကျနော်တို့နေရမယ့် တိုက်ကအိမ်သာက ဘယ်နားမှာလဲ "
" ကျနော်ထမင်းဆိုင် ရှာတာရှာမရလို့ ..ဗိုက်တွေတောင်ဆာနေပြီ.."
အဲလိုပေါက်ပေါက် ရှာရှာလေးတွေ မေးတတ်ကြသတဲ့။ သူဌေးနဲ့ဖုန်းပြောပြီးသွားလို့ ဖုန်းကချလိုက်ပြီ။ ပြီးမှ ဘယ်ကိုသွားခိုင်းလိုက်တာလဲ မသိဘူး " go " လို့တော့ပါတယ် ဆိုပြီး ထပ်မေးတာမျိုး လည်းပါသေး။ သူဌေးပြောသမျှကို " Yes " လို့ပြောပြီးမှ သူငယ်ချင်းကို ပြန်မေးတတ်လွန်းလို့ သူကပါ ဘာပြောလဲဆိုတာ နားထောင်ပေးနေရသတဲ့။ ကိုယ့်ချင်းကိုယ့်ချင်း ကူညီပေးတဲ့ သဘောမျိုးပေါ့လေ။
ဒါနဲ့တစ်ရက်တော့ အမေကိုလည်းချစ်၊ အမျိုးကိုလည်းချစ်တဲ့ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်လေး အသစ်စက်စက် တစ်ယောက် ရောက်လာသတဲ့။ အဲသူလေးကတော့ဖြင့် အင်္ဂလိပ်လို လည်လည်ဝယ်ဝယ် ပြောနိုင်သတဲ့။ နာမည်က
" လင်းသြဘာ " တဲ့။ နာမည်ကခက်လေတော့ တရုတ်ဖရိုနှောင်ဇေးရှင်းနဲ့ဆို လျှာလိပ်တာပေါ့ကွယ်။ ဒါတော့သဘာဝပါပဲလေ။ မစ်စ်တာလင်း လည်းလုပ်လို့မရပြန်ဘူးတဲ့။ ရုံးမှာမစ်လင်းဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက ရှိနှင့်နေပြီးသား ဖြစ်နေပြန်ရော။ ဒါနဲ့ပဲ သူဌေးက ဘိုလိုလေးနာမည် အသစ်လေးပေးပြီး ကင်ပွန်းတပ် လိုက်တယ်။ အမယ် သကောင့်သားလေးက လုံးဝ(လုံးဝ) ကိုလက်မခံ နိုင်ပါဘူးတဲ့ကွယ်။ ဒီနာမည်ဟာ မွေးကတည်းက မာတာမိခင်က ကင်ပွန်းတပ်ပြီး မှည့်ခေါ်ထားပါသတဲ့။ သူဌေးက ကျေးဇူးရှင် မျိုးချစ်လေးကို ဒီမှာခေါ်ရလွယ်အောင်ပါလို့ တောင်းတောင်းပန်ပန်လေး ပြောရှာပါသေးသတဲ့။ ဒါပေမယ့် အမေ့သား ဇာနည်ဖွားလေးက ဇာတိသွေးရဲရဲနီပြီး သူ့နာမည်ပဲ ပီပီသသ ခေါ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါလို့ ပြောလိုက် သတဲ့လေ။ နောက်ဆုံးတော့ ဒီလိုအဓိကရုံးတွေ ဖြစ်ပြီးသူဌေးက သူ့ကိုအလုပ်မခန့်ရသေးခင်မှာပဲ
ကဲ..ကျုပ်ပြောပါပကောလား။ ကြုံဖူးပေါင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါပဲလို့။
Posted by Phannaywon 1 comments at 12:21 AM
Labels: " ကြုံဖူးပေါင် ဂုဏ်ထူးဆောင် "
နှလုံးသား DNA ချင်းတူရမယ်တဲ့။
Posted by Phannaywon0comments at 4:41 AM
Posted by Phannaywon0comments at 11:20 PM